Tirada maxbuusta xabsiyada Iswedhen ku jira oo yaraadey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Albaab xabsi. Foto: Ila-fängelset
Tirada maxbuusta xabsiyada Iswedhen ku jira oo yaraadey
La daabacay tisdag 26 februari 2013 kl 11.59
Inta qof ee xabsiyada ku jira Iswedhen ayaa ah tiradii ugu yareyd mudo 11 sanno ah uu qoray wargeyska Dangens Nyheter. iyada oo weliba siyaasada xukumada tahay adkeynta cinqaabta faldenbiyeedyada.
Ulf Jonsson oo madax ka ah qayb kamid ah hay'ada asluubta ayaa aaminsan in aysan ahmiyad gooniya laheyn in dad badan xabsiyada ku jiraan.
- Ma lahan qiimo gooniya in dad badan lagu hayo xabsiyada, waxaa ka haboon farsamooyinka kale, sida in lugta looga xiro katiinada GPS:ka leh ama lagu xukumo in ay u shaqeeyaan bulshada kuwooda aan denbiyada culculus gelin. Taas ayaa ruuxa iyo bulshadaba u wanaagsan , ayuu yeri.
Sida ay muujneyso tirokoob laga heyley hay'ada daryeelka maxaabiista "Kriminalvården", sannadkii hore 5 000 oo ruux ayaa xabsiyada Iswedhen ku jirey. Waana tiradii ugu hooseysey ee xabsiyada ku xiran tan 2001.
Tirada ugu badan ee isdhintey ayaa dadka lagu xukumo xabsiyada inta u dhaxeysa labo bilood ilaa hal sanno.
Sababta ay maxkmadahu ugu xumumaan xabsiyada tiro ka yar intii hore ayeysan jirin cid ka jawaabi karta . Laakiin hay'ada daryeelka maxaabiista ayaa aamnisan in ay tan u sabab tahay in maxkmadahu ka doorbidaan cinqaabaha kale ah ganaax, katiinada GPS:ka iyo weliba u shaqeynta bulshada. Sidoo kale hay'ada ayaa aaminsan in garsoorka marmar badan iska dhaafo dacwad ku oogida.
Maxkmadaha arimahaas ay ayey aaminsanyahiin in yahiin kuwo ka roon xabsiyada, sidaas waxaa leh Fredrik Wersäll oo ah madaxweynaha maxkmada dhaxe ee hovrätten. Mano u arko in hadefka xukumada ee ah adkeynta cinqaabta faldenbiyeeda mid hirgeli kara.
- Si hadafka xukumada ee ah adkeynta cinqaabta u noqoto hirgal iyada oo loo marayo dhabo tusyada maxkmadaha ka soo baxa waxey u baahantahay in sharuucdo arimahaas quseysa ay ahaato mid cad, waa suurto-gal in sharci dejinta aysan yeelan saameynta ay xukumado rajeyneysey. Waxaan aaminsanhey in wax ka badelidii shaarciyada la xiriira faldenbiyeedyada rabshada ah ay tan tusaale u tahay, ayuu yrei Fredrik Wersäll madaxa maxkmada Svea hovrätt.
Laakiin xataa hadii ay yaraatey inta ruux ee xabsiyada ku jira hada barofesor Jerzy Sarnecki ayaa aaminsan in tirada maanta xabsiyada ku jira ay tahay tiro aad u badan marka la firiiriyo taariikhda.
- Waa sax in ay is-dhintey tirada xabsiyada ku jira dhorkii sanno ee ugu danbeeyey, laakiin tani waxay timid waqti badan oo ay aad u kordhayeen dadyowga xabsiyada ku jira, ayuu Jerzy Sarnecki oo ah barofesor culuumta danbiyada.